मलेसियन सरकार आक्रामक बनेपछि १२५ नेपाली कामदारलाई पर्यो यस्तो आपत ! || सुनौलो नेपाल
मलेसियन सरकार आक्रामक बनेपछि १२५ नेपाली कामदारलाई पर्यो यस्तो आपत !
काठमाडौं, २१ असार । रोजगारीकालागि मलेसिया पुगेका नेपालीहरुको भिषा म्याद सकिएपछि गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका मध्ये १ सय २५ जनालाई नेपाल फर्काइने भएको छ।
मलेसियन सरकारले गैरकानुनी रुपमा लुकेर काम गरिरहेका आप्रवासी कामदारमाथि आइतबारदेखि पक्राउ गर्ने थालेको थियो । सो क्रममा पक्राउ परेका नेपालीलाई त्यहाँस्थति नेपाली दूतावासले फर्काउने तयारी गरेको हो। अन्य नेपालीहरु सम्पर्कमा आइरहेको र अवैध रुपमा बसेकाहरुलाई नेपाल फर्काइने दूतावास कार्यालयले जनाएको छ।
आइतबार र सोमबार मलेसियन सरकारले ३ सयभन्दा धेरै आप्रवासी कामदार पक्राउ गरेको थियो ।
मलेसियाको गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले आइतबारदेखि राजधानी क्वालालम्पुरका जलान तुन रजाक, सेन्ट्रल मार्केट, पासार सेनि, लेबु पुडु, मेडान पासार, पेतालिङ स्ट्रिट र जलान सिलाङमा धरपकड गरेको मलेसियन सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। नेपाली तथा बंगलादेशका नागरिकले सञ्चालन गरेका होटल र रेस्टुरेन्टहरुमा पनि धरपकड गरिएको थियो।
तर त्यस क्रममा कति नेपाली पक्राउ परे भन्ने खुल्न नसकेको दुतावसले जनाएको छ ।
बिहि, असार २१, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस